Vaovao - BXL Creative Packaging Guizhou Factory sonia ofisialy!
Tamin'ity taona ity, izay mifanandrify amin'ny tsingerintaona faha-21 an'ny orinasa, ny BXL Creative dia nasain'ny Governemantam-paritany Guizhou hanangana orinasa any Guizhou hampiroborobo ny fampandrosoana ara-toekarena any. Amin'ny maha orinasa voatanisa feno fankasitrahana antsika dia anjarantsika ny mandray anjara amin'ny fiaraha-monina. Ankoatr'izay, drafitra stratejika lehibe ho an'ny orinasa ny fanitarana ny orinasany any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Sina.
BXL Creative dia nankany amin'ny Faritanin'i Guizhou hanaovana famotopotorana sy ny fisafidianana ny tranonkala.
Nanomboka tamin'ny volana Mey ka hatramin'ny septambra 2020, ny filohan'ny orinasa Zhao Guoyi dia nitarika ekipa iray hanao fizahana sy fanadihadiana any an-toerana amin'ny toerana maro ao Guizhou. Taorian'ny fandinihana tsara nataon'ny fitantanana ambony an'ny orinasa, ny BXL Southwest Facility dia nipetraka tao amin'ny Zone Development Economic of Jinsha County, Bijie City, Faritanin'i Guizhou.
Fitsidihana sy fifanakalozana ao amin'ny foiben'ny famoronana BXL.
Tamin'ny fivoriana fifanakalozana tao Shenzhen, ny HQ an'ny BXL Creative,, dia nifanaraka ny roa tonta mba hampifangaro ny tombony sy ny loharanom-pahalalana ary ny fiaraha-miasa lalindalina mba hahatrarana ny tombotsoan'ny tsirairay sy ny valim-pifidianana.
Lanonana fanaovan-tsonia tetikasa
Ny sekretera lefitry ny antoko Jinsha County Party dia ny sekretera lefitra ary ny ben'ny tanànan'i Li Tao (ankavanana) ary ny Shenzhen BXL Creative Packaging Co., Ltd. ny filohan'ny Zhao Guoyi lavitra (ankavia) dia nanao sonia ny "Guizhou BXL Creative Packaging Production Base Project Investment Investment Investment" amin'ny anaran'ny roa tonta .
Previous: BXL Creative Nahazo mari-pankasitrahana famonosana 4 amin'ny fifaninanana Mobius Advertising Awards
Manaraka: BXL Creative dia nahazo ny loka famoronana iraisam-pirenena momba ny Pentawards telo